Gold Plated Metal Badge Soft Enamel Pin
Size: ihe dika 4cm
Azụ azụ: a gbajiri ájá na 2 na-akwado posts
Nkwakọ ngwaahịa: akpa poly / kaadị nkwado omenala.
Usoro usoro: ịkpụzi, ịnwụ mgbatị, polishing, plating, enamel dị nro, QC, nkwakọ ngwaahịa.
Okike: adụ enamel
1. you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
EE, anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na asambodo ISO na TUV.
2. Anyị nwere ezigbo echiche, ị nwere ike ịhazi anyị?
Anyị nwere ike imepụta ihe osise maka gị dịka ịgbaso faịlụ ndị a: JPG, PNG, PDF, AI, CDR, wdg.
3. kedu maka MOQ?
4. Ogologo oge ole ka m ga-enweta akwụkwọ m mgbe m nyere iwu?
Oge ntụgharị na-adabere n'usoro n'usoro na nkà dị iche iche.
Nọmalị, ọ bụ ihe dị ka otu izu maka n'omume mgbe artwork enen; 10-20 ụbọchị maka nnukwu mmepụta.
5. Kedụ ka m nwere ike ịdabere na mma gị?
Tupu Mbupu, anyị ga-egosi gị foto na vidiyo maka nyocha niile, nsogbu ọ bụla, anyị nwere ike idozi tupu mbupu.
Ọbụna nsogbu dị adị mgbe ị nwetara ngwaahịa a, anyị nwere ọrụ mgbe azụmaahịa gachara iji rụọ ọrụ yana ngwọta kacha mma ruo mgbe afọ juru gị.
Ọzọkwa, anyị na-akwado ndị ahịa ka ha mee Iwu Nkwado Azụmaahịa ka usoro ọ bụla wee nwee ike ịnọ n'okpuru nchedo otu Alibaba, nke na-enye nchebe nke nchekwa abụọ.
6. Kedu maka usoro ịkwụ ụgwọ?
Anyị nwere ike ịnabata T / T, PayPal, WU, MG, wdg. 30% -50% nkwụnye ego iji malite iwu, enwere ike ịmechaa nhazi tupu mbupu. Enwere ike ịmekọrịta ihe ọ bụla ọzọ chọrọ maka usoro ịkwụ ụgwọ.
7. Enwere m ike ịhọrọ ụzọ mbupu?
N'ezie! Site Oké Osimiri, Site Ikuku ma ọ bụ Site Couriers: FedEx, TNT, DHL, UPS, wdg You nwere ike ịhọrọ ụdị ụgbọ mmiri ọ bụla dabara adaba maka gị.
Nke gara aga: Ngwunye Kidsmụaka ọla edo na-acha uhie uhie na-ekpuchi Epoxy
Osote: Omenala Design Factory Mere Running Badge Gold plating Soft Enamel Lapel Pin
Pinye Pin Enamel
Uwe Pin Pin
Omenala Lapel Pin
Enamel Pin etstọ
Lapel Pin Na Chain
Ngwongwo agha Lapel
Mara mma Anumanu Lapel Pin Badges
Enamel Pin Manufacturers Omenala Mere HK Global ...
Ewute Enamel Pin Custom Design Aluminium Mere ...
Ugboro abụọ kwadoro Metal ego Zinc Alloy Mere Dual P ...
Omenala Enamel Pin kechioma mkpuchi Yellow Soft Enam ...